Guddiga Madaxabanaan oo shahaaddada ku meel gaarka ah gudoonsiiyey 5 xisbi siyaasadeed. – GMDQ
Waxaa la geliyey Warbixinno, Warsaxaafadeedka, Xisbiyada
Guddiga Madaxabanaan oo shahaaddada ku meel gaarka ah gudoonsiiyey 5 xisbi siyaasadeed.
Munaasabada shahaado gudoonsiinta waxaa ka soo qeyb galey xubnaha xisbiyada shanta ah iyo marti Sharaf kale.
Ka dib marka uu furmey munaasada waxaa u Hadley xisbiyada la gudoon siiyey shahaadada KMG ah Maxamed Cusmaan Shuuriye oo ka mid XISBIGA DARYEELKA,wuxuuna sheegay Maxamed in ay aad ugu farxeen shahaado gudoonsiinta ayna doonaayaan inay ka qeyb qaataan dib u soo celinta xasiloonida dalka ayna iska fogeyn doonaan wax walboo dhib ku ah qarannimada iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed.xisbigiisana uu yahay xisbiyadii matali lahaa ummada Soomaaliyeed.
Dhanka kale waxaa magaca Guddiga ee shahaado gudoonsiinta ka qeyb qaatey masuuliyiinta Guddiga ee kala ah Xuseen Cabdi Aadan iyo Maxamed Daahir Maxamed.
Xuseen Cabdi Aadan ayaa sheegay in 5 ta xisbi ee maanta shahaadada la gudoonsiiyey ay yihiin 5 xisbi oo waqti badan soo qaadatey inay maraan jidkii ay ku heli lahaayeen shahaadada KMG ah,5ta xisbi waxaa ka horeeyey xisbiyo badan, diiwaangelintuna waa diiwaangelin ku meelgaar ah, wuxuuna u sheegay xisbiyada in ay furan kartaan xafiisyo. Lagana doonaayo in nidaamka qabiiliga ah ee qeybsiga 4.5 ay ka saaraan dalka si loogu gudbo doorasho cod iyo qof xalaal iyo xor ah.
Xisbiyada maanta sida kumeel gaarka ah loo gudoonsiiyey shahaadada waxay kala yihiin, XISBIGA U HIILI DADKAAGA, XISBIGA DARYEELKA SOOMAALIYEED, XISBIGA DAL DHIS, XISBIGA HIMILO QARAN iyo XISBIGA SAMADOON
Guud ahaan marka leysku daro tirada la gudoon siiyey shahaadada KMG ah waa 35 xisbi.waxaase xusid mudan in weli ay socoto diiwaangelinta xisbiyada KMG ah.
Waxaa la faafiyey December 18, 2018 December 18, 2018